JAGOOYIN BANNAAN: Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay xilal sare oo loo tartamayo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay shaqooyinka ka bannaan dowladda oo tartan loo gelayo oo ay ka mid yihiin jagooyinka agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha iyo xoghaye joogto ah.
Shaqooyinka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya soo bandhigay waxaa ka mida: Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha Federaalka, Agaasinka Bii’ada ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaaraha iyo Xog-hayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah.
Qofkii ay dani ka heysto inuu shaqooyinkan codsado wuxuu raacayaa tallaabooyinka hoos ku qoran:
DEGSO FEYLKAN: Talobixin-Kooban
Feylka kowaad waxa uu faahfaahin ka bixinayaa habka loo marayo xulashada tartamayaasha iyo shuruudaha looga baahan yahay tartamayaasha.
Feylka labaad waxaa soo buuxinaya tartamayaasha jagooyinka kala duwan, waxayna codsiyadooda ku dirayaan emailkaL hr@opm.gov.so ugu danbeyn 17 Disembar, 2017 11:59 fiidnimo (Saqda dhexe).
Halkaan ka Tixraac: https://opm.gov.so/shaqooyin
Previous articleAKHRISO: Magacyada xisbiyada sida KMG ah loo diiwaangeliyay & Guddoomiyeyaashooda [Sawirro]
Next articleWaddooyinka muhiimka ah ee Muqdisho oo xiran & Wararkii ugu danbeeyay ee shirka